ओलीले पशुपतिनाथमा पुजा गर्दा 'नाटकै हो' भन्नेहरुलाई बालुवाटारबाट आयो कडा जवाफ, प्रचण्डको भैंसी पुजा भाइरल!Nepalpana - Nepal's Digital Online
सोमवार, फाल्गुण २४ गते २०७७
२०७७, फाल्गुण २४ गते
Nepal Pana माघ १५ २०७७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पशुपतिनाथ मन्दिरको पूजा र भैँसी पूजामा फरक रहेको बताएका छन् ।
सल्लाहकार थापाले बिहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेर प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा गरेको पूजाको प्रशंसा भएको बताएका छन् ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिनाथको मन्दिरमा पूजाआजा गरेको विषय सर्वत्र प्रशंसा भएको थापाले बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले माघ १२ गते बिहान पशुपतिनाथ मन्दिरमा संकल्प पूजा गरेका थिए ।
सल्लाहकार थापाले पशुपतिनाथमा पूजाआजाका लागि पुगेका प्रधानमन्त्री ओली र भैंसी पूजा गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का बेग्लाबेग्लै तस्बिर फेसबुकमा राखेर पशुपतिनाथमा पूजाआजा गरेजस्तो भैंसी पूजा स्वभाविक मानिँदैन भनेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री एवं पशुपति विकास कोषका संरक्षक केपी शर्मा ओलीले माघ १२ गते बिहान ८ः३० बजे श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रमण, निर्माण कार्यको निरीक्षण एवं विशेष पूजा र दीप प्रज्वलन गर्नुभयो,’ उनले लेखेका छन् ।
‘सुनको जलारी निर्माणको मन्दिरको योजनामा जम्मा रहेको ६५ करोड बजेटमा सरकारका तर्फबाट ३० करोड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताको घोषणा गर्नुभयो’, थापाले भनेका छन् ।
थापाले पहिले पित्तल र तामाको जलारी रहेकोमा अब १४१ किलो सुनको जलारी निर्माणको सुनिश्चितता भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘दैनिक हजारौं जनता श्रद्धाका साथ पूजाआजामा जाने पशुपतिनाथ मन्दिरमा उहाँको यस कार्यको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ ।’
थापाले राखेको दोस्रो तस्बिर प्रचण्डको छ । ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि नेपकपामा प्रचण्ड–माधव समूह बनाएर प्रचण्ड विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो शक्ति बृद्धिका खातिर सायद सुनसरीमा भैंसी पूजा गर्नुभएको थियो। भैंसी पूजा गर्नुलाई पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेर विश्व शान्ति र मानव कल्याणको लागि पूजा गर्नुजस्तो स्वभाविक मानिँदैन’, थापाले भने, ‘बुझ्ने आ–आफ्नै स्तर हुन्छ । फरकचाहिँ यत्ति हो !’
तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष हुँदा २०६६ माघ २९ मा भैंसी पूजा गरेको भन्दै प्रचण्डको आलोचना भएको थियो । त्यसबेला उनले ग्रह शान्तिका लागि भन्दै भैंसी पूजा गरेका थिए ।
बालुवाटारमा ओलीविरुद्ध कसले गर्दै छ हाइलेबलको सुराकी ? भेटियो ठुलो प्रमाण!
ओली भन्छन्ः नेपाल–चीन सम्बन्धमा कुनै कुराले असर गर्दैन
प्रधानमन्त्री ओली टिकटकमा पनि, फलोअर्स र भ्युजको बाढी !
माघ १५, २०७७ बिहिवार १०:३०:४३ बजे : प्रकाशित
कुण्ठित भीम रावललाई प्रदीप ज्ञवालीको मुख भरिने जवाफ !
गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै पीडित परिवार बालुवाटारमा, उपेन्द्र यादव जेल जाने निश्चित!
प्रदेश प्रमुख अहिराजको नागरिक सेवा : सुर्खेतमा दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई आफ्नै गाडीमा अस्पताल पुर्याए
भ्रष्टाचारी जोगाउने मन्त्रीको रामधुलाइ, मधेसको राजधानीमै कुटिए योगेन्द्रराय यादव
'माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ता,' प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने शर्त राखे !
संसदमा चर्को बोल्ने भीम रावलको चुरीफुरी तोडे शंकर पोखरेलले, ‘डिप्लोमेटिक’ जवाफले ठहरै!
केपी ओलीलाई गलहत्याएर निकाल्छु भन्ने प्रचण्ड-माधव आफैं निस्किए
ओली-प्रचण्ड समुहको नेकपा दर्ता खारेजी निर्वाचन आयोगमा !
भारत चीनबीचकाे सीमा विवादकाे विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले मुख खाेले !
अन्तत: सभामुख पनि ओलीकै लाइनमा, संसदमा देखियो फरक दृश्य
संसद भवनबाट प्रधानमन्त्रीले गरे यस्तो घोषणा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपामा खुसीयाली !